Ku dhis boggaaga gaarka ah ee Adeegga Google | Martech Zone
Ku dhis boggaaga gaarka ah ee Bilaabashada Google Apps
Arbacada, Agoosto 22, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Caawa waxaan go aansaday inaan nasto laakiin wali waxaan rabay inaan ku daro xoogaa pizazz ah shaqo cusub. Waa koox yar oo aan la shaqaynayo laakiin way fiicantahay sida ay ugu furan yihiin tikniyoolajiyadda. Isla markiiba fiidmeertii, waxoogaa ka mid ah dukumiintiyadii aan wadaagnay ayaan u wareejiyay Google Docs. Waxay ahayd tallaabo aad u wanaagsan tan iyo markii aan haysanno xoogaa ilo-xeebeedka ka baxsan. Hadda kulligeen waxaan haysannaa dukumiinti isku mid ah oo leh cusbooneysiintii ugu dambeysay - oo aad waxtar badan u leh.
Saaxiibkey Bill ayaa i weydiiyay sababta aanan u jabin Google Apps. Wuxuu sheegay nin kale oo saaxiibkiis ah, Dale, inuu u adeegsaday aasaasida meheradda xaaskiisa oo ay aad u jeclaayeen. Marka caawa waxaan xoogaa ku ciyaaray. Waa wax yar oo cakiran, laakiin way shaqeyn kartaa work Waan sii wadi doonaa qiimeynta si aan u arko.
Waxaan dhisay hal muuqaal runtii aad u wanaagsan caawa, in kastoo. Barnaamijyada Google waxay kuu oggolaaneysaa inaad dhisto Bogga bilowga ah oo xitaa kuu siiya adiga DNS dejinta haddii ay dhacdo inaad rabto inaad ku dhisto boggaaga! Tusaale ahaan, waxaad sameyn kartaa bogga http://start.yoursite.com! Caawa waxaan dhisay Bogga Bilowga Patronpath:
Calaamadeena iyo midabada sumadeena ayaa qurxinaya bogga.
Waxyaabaha kuxiran sadarka bidix oo ay kujiraan Jadwalka guud, cimilada deegaanka, iyo dabcan, National Restaurant Association ayaa quudisa!
Labada tiir ee saxda ah waa loo habeyn karaa si kasta oo qofku u jeclaan lahaa, sida oo kale iGoogle.
Lugeyuhu wuxuu leeyahay xiriiriyeyaal caadooyin ah oo ku jira dhowr degelladayada ah.
Maaha wax weyn ama buuq leh, laakiin daqiiqado yar oo lagu ciyaarayo qalab bilaash ah, waa nooc qabow!
Baraha Bulshada Ma Daaweyn Karaa Murugada?
Dagaal Browser: Internet Explorer ayaa sii wadaya inuu Khasaarayo Firefox, Maxaa Safari ah?
Agoosto 27, 2007 saacaddu markay ahayd 9:41 PM
Waa qabow. Waxan dejinayaa waxan laba bilood ka hor back
Sep 10, 2007 at 10: 03 AM
Waxaan kugula talin lahaa bog-fiiqista ama netvibes cidna. Waxaan u adeegsadaa bog-fiiq si aan u maareeyo cinwaano badan oo emayl ah isla markaana aan ugu biiro illaa 30 baloog. Waxay ka dhigeysaa mid aad u fudud!